5 Kunyorera kweRegression Analysis muBhizinesi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Chii chinonzi Regression Analysis?
Kuongorora kudzoreredza mune bhizinesi inzira yekuverenga inoshandiswa kuwana hukama pakati pezviviri kana kupfuura zvakazvimirira uye zvinoenderana. Imwe musiyano yakazvimiririra uye zvainoita pane zvimwe zvinoenderana zvinoyerwa. Zvakare kutaura, kune anopfuura gumi marudzi eanodzora mamodheru. Kana paine imwe chete inotsamira uye yakazvimirira inoshanduka, kana fungidziro inoshanduka, isu tinoti iko kuri nyore kudzoka Kune rimwe divi, kana paine zvakawanda zvakazvimiririra zvinokanganisa zvine mutsindo mumwe musiyano tinozvidaidza zvakawanda kudzoreredza.
Linear regression modhi inzira yakasarudzika yekuenzanisira hukama pakati pemhinduro yescalar uye imwe kana yakawanda inotsanangurwa misiyano. Iyo kesi yeimwe tsananguro inoshanduka inonzi yakapfava mutsara kudzokororwa. Kune inopfuura imwechete tsananguro inoshanduka, maitiro acho anonzi akawanda akatanhamara kudzora.
Nonlinear regression inzira yekudzokorora kuongororwa uko dhata inokodzera modhi uye inozoratidzwa seye masvomhu basa. Nonlinear regression inoverengwa nekutsvaga mutsauko pakati peiyo yakagadziriswa nonlinear basa uye yega Y poindi yedhata mune yakatarwa.
Ngatizvinzwisisei nemuenzaniso wakapusa. Ngatiti iwe une bhizimusi remonade. Rakareruka mutsetse kudzokororwa chaihwo hupenyu hwehupenyu hunogona kureva kuti iwe unowana hukama pakati pemari uye tembiricha, ine saizi saizi yemari semusiyano unoenderana. Mukana wekuchinja kwakasiyana siyana, unogona kuwana hukama pakati pekupisa, mitengo uye nhamba yevashandi kune mari. Nekudaro, kudzokorodza kuongororwa kunogona kuongorora kukanganiswa kwezvinhu zvakasiyana pamabhizimusi kutengesa uye purofiti.
Iko zvakare kune nguva yakateedzana kudzoka. Nguva dzakateedzana kudzora inzira yehuwandu hwekufungidzira mhinduro yeramangwana zvichibva munhoroondo yekupindura. Nguva dzakateedzana kudzora dzinobatsira mukunzwisisa uye kufanotaura maitiro eesimba masisitimu kubva kune yekuyedza kana yekutarisa data.
Heano mamwe ekushandisa kwayo mubhizinesi:
Read More: 5 Anoshanda Anoshandisa eBig Data muBhizinesi
Unofarira Big Data analytics? Tora izvo zvazvino kuvandudza, mafambiro uye budiriro needu eBook:
5 Mashandisiro eRegression Analysis muBhizinesi:
Kufanotaura analytics kureva kufungidzira mikana yenguva yemberi uye njodzi ndiko kushandiswa kwakanyanya kwekuongororwa kwekudzokorora mubhizinesi. Kudiwa kuongororwa, semuenzaniso, inofanotaura huwandu hwezvinhu izvo mutengi angangotenga. Nekudaro, chinodikanwa handicho chega chinoenderana kana zvasvika kune bhizinesi. RA inogona kuenda kure kupfuura yekufungidzira kukanganisa kune yakananga mari. Semuenzaniso, tinogona kufungidzira huwandu hwevatengi vanozopfuura pamberi pechimwe chikwangwani uye voshandisa iyo data kuyera huwandu hwekuhota kushambadziro. Makambani einishuwarenzi anovimba zvakanyanya nerejisheni yekuongorora kuti vafungidzire kumira kwechikwereti chevamiriri vemitemo uye inogona kuitika nhamba yezvikwereti mune yakapihwa nguva nguva. Data Science kunzwisisa kwakakosha kwe predictive analytics.
Read More: 8 Nzira dzekukwiridzira Predictive Analytics yeBhizinesi
Kudzoreredza mamodheru anogona zvakare kushandiswa kugadzirisa maitiro ebhizinesi. Maneja wefekitori, semuenzaniso, anogona kugadzira manhamba ekuverengera kuti anzwisise kukanganiswa kwekupisa kweovheni pasherefu hupenyu hwemakuki akabikwa mumaovhoni iwayo. Munzvimbo yekufona, tinogona kuongorora hukama pakati penguva yekumirira kwevanofona uye nhamba yezvichemo. Dhata-inotungamirwa kuita sarudzo inobvisa fungidziro, fungidziro uye zvematongerwo enyika zvemakambani kubva mukuita sarudzo. Izvi zvinovandudza mashandiro ebhizinesi nekusimbisa nzvimbo dzine hunyanzvi hwekuita pamwe nekuwana mari.
3. Kutsigira Sarudzo:
Mabhizinesi nhasi akaremerwa nedata pane zvemari, mashandiro uye vatengi kutenga. Nekuwedzera, vatungamiriri vava kuvimba nedata analytics kuita sarudzo dzine ruzivo dzebhizinesi dzine huwandu hwehuwandu, nekudaro kubvisa iyo intuition uye gut kunzwa. RA inogona kuunza kona yesainzi kune manejimendi chero mabhizinesi. Nokuderedza huwandu hwakawanda hwe data nyowani kuti ive ruzivo rwekuita, kudzokorodza ongororo kunotungamira nzira yehungwaru uye sarudzo dzakajeka. Izvi hazvireve kuti RA ndiko kupera kwevatungamiriri kufunga kwekugadzira. Iyi nzira inoshanda seyakakwana chishandiso kuyedza fungidziro usati wadzvanyirira mukuuraya.
4. Kugadzirisa Zvikanganiso:
Kudzvinyirira hakusi kukuru chete kwekukweretesa rutsigiro rwehutongi kuzvisarudzo zvevatariri asiwo kuona zvikanganiso mukutonga. Semuenzaniso, maneja wechitoro anogona kutengesa kuti kuwedzera maawa ekutenga kuchawedzera zvakanyanya kutengesa. RA, zvisinei, inogona kuratidza kuti kuwedzera kwemari kunogona kunge kusingakwanise kutsigira kukwira kwemashandisirwo ekushandisa nekuda kwemaawa mazhinji ekushanda (senge mamwe mabasa evashandi). Nekudaro, ongororo iyi inogona kupa huwandu hwesigiro yezvisarudzo uye kudzivirira zvikanganiso nekuda kwekufungidzira kwemaneja.
5. Nzwisiso Itsva:
Nekufamba kwenguva mabhizimusi akaunganidza huwandu hwakawanda hweasina kurongeka data ayo ane mukana wekupa zvakakosha kukosha. Nekudaro, iyi data haina basa pasina kuongorora kwakakodzera. RA matekinoro anogona kuwana hukama pakati pezvakasiyana zvakasiyana nekufumura mapatani aimboonekwa kare. Semuenzaniso, kuongororwa kwedata kubva kunzvimbo yekutengesa masisitimu uye maakaundi ekutenga anogona kusimudzira maratidziro emusika sekuwedzera kwekudiwa kune mamwe mazuva evhiki kana pane dzimwe nguva dzegore. Iwe unogona kuchengetedza zvakakwana masheya nevashandi pamberi pespike mukuda inomuka nekubvuma izvi zvimiro.
Read More: Maitiro Ekuwedzeredza Bhizinesi Njere Nzira Yakakodzera?
At NewGenApps, isu tinoshanda mukuita zvine musoro kunze kwedata. Tine timu inoshamisa yevanamazvikokota vane hunyanzvi mumatekinoroji senge Big Data, gore kadambari, AI, ML nezvimwewo. Kana iwe uchitsvaga kambani kuti ikubatsire iwe kuwedzera aya matsva matekinoroji saka inzwa wakasununguka taura nesu.
Musiyano chaiwo pakati peBig Data neData Sayenzi hauna kujeka. Saka rega uwane kuti ndeipi data sainzi uye hombe data zvinorevei?